Oovimba beDicamba- Ilungelo laseMelika lokwazi
Isimangalo sikaDicamba ngokuchasene neBayer, i-BASF ikulungele ukuqhuma, utsho amagqwetha
ezaposwa ngomhla Februwari 26, 2020 by UCarey Gillam
Amawakawaka amafama aphuma kumazwe amaninzi kulindeleke ukuba ajoyine amatyala amakhulu kulindelwe kwinkundla yomanyano malunga namabango okuba iimveliso zokubulala ukhula eziphuhliswe yi-Monsanto Co yangaphambili kunye nezinye iinkampani zamachiza zitshabalalisa kwaye zingcolisa izityalo, kubandakanya imveliso yemveliso, iqela lamagqwetha kunye batsho abalimi ngoLwesithathu.
Inani lamafama afuna ukumelwa ngokusemthethweni ukuba afake isimangalo ngokuchasene neMonsanto kunye ne-BASF inyukile kwiveki ephelileyo enesiqingatha emva kwebhaso le-jury yezigidi ezingama-265 Umlimi wepesika waseMissouri otyhola ukuba ezi nkampani zimbini zazibekek 'ityala ngokuphulukana nobomi bakhe, ngokukaJoseph Peiffer wenkampani yamagqwetha yasePeiffer Wolf Carr & Kane. U-Peiffer uthe ngaphezulu kwama-2,000 amafama kulindeleke ukuba babe ngabangqina.
Sele kukho ngaphezulu kwamafama ali-100 enza amabango ngokuchasene neenkampani ezidityanisiweyo Isimangalo semimandla emininzi kwiNkundla yeSithili sase-US eKapa Girardeau, eMissouri.
Kwangoko kule nyanga bellwether ityala Kweso simangalo siphele nge-juri evumelekileyo yokunikezela ngeefama zosapho lwe-Bader Farms eyi- $ 15 yezigidi kumonakalo wembuyekezo kunye ne-250 yezigidi zeedola kumonakalo owohlwayayo, eza kuhlawulwa yiBayer AG, inkampani yaseJamani eyathenga iMonsanto kwi-2018, kunye ne-BASF. Ijaji yagqiba ukuba iMonsanto kunye ne-BASF baceba ukwenza izinto ababesazi ukuba ziya kukhokelela ekonakaleni kwezityalo kuba babelindele ukuba iyonyusa inzuzo yabo.
"Ngoku sinemephu yendlela yokufumana ubulungisa kumaxhoba edicamba. Isigwebo seBader eMissouri sathumela umqondiso ocacileyo wokuba awunakufumana nzuzo ngokwenzakalisa amafama amsulwa uze uphume kuwo, ”utshilo uPeiffer. "Uphando lomonakalo wezityalo kunye nezikhalazo ezandayo zabalimi zixela ingxaki enkulu kunokuba iMonsanto / Bayer kunye neBASF befuna ukuyamkela."
Ilungelo laseMelika laseMelika lokucela i-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo (i-EPA), evume i-dicamba herbicides ngaphandle kobungqina besayensi bobungozi, ukubonelela ngesibalo sikazwelonke senani elipheleleyo lezikhalazo ze-dicamba drift. Kodwa ngelixa i-EPA isithi ithatha iingxelo "ngokungathí sina," iyalile ukubonelela ngamanani kwaye yathi i-arhente zikarhulumente ukusingatha ezo zikhalazo.
I-EPA ikwabonakalise ukuba akuqinisekanga ukuba umonakalo ochazwe ngamafama, phofu, ubangelwa yicicamba.
"Oonobangela beziganeko ezahlukeneyo zomonakalo abakazicaci, nanjengoko uphando lusaqhubeka," utshilo isithethi se-EPA. “Kodwa i-EPA ijonga lonke ulwazi olufumanekayo ngononophelo.
"Ukukhahlela ibhombu yexesha"
Njengokuba iMonsanto kunye neBayer beye bajongana nokulahla amaxwebhu angaphakathi ekulahlekelweni kwezilingo ezintathu ngenxa yamabango e-Monsanto's glyphosate-based herbicides abangela umhlaza, maninzi amaxwebhu enkampani angaphakathi afunyenwe kwisimangalo se-dicamba esincede ukukholisa inkundla yecala lenkampani, ngokuka Bader Ummeli weefama uBill Randles.
IRandles ifumene amakhulu eerekhodi zangaphakathi zeMonsanto kunye ne-BASF ezibonisa ukuba iinkampani beziyazi ingozi eziyakuthi ziveliswe ziimveliso zabo nanjengoko bebexele esidlangalaleni okuchasene noko. Uthe olunye uxwebhu lwe-BASF lubhekisa kwizikhalazo zomonakalo we-dicamba njengesiqhushumbisi sexesha "esele liqhushumbe."
I-Bader kunye namanye amafama atyhola ukuba iMonsanto yayingakhathali ekukhupheleni umqhaphu wobunjineli kunye neembotyi zesoya ezinokusinda zitshizwe nge-dicamba herbicides kuba kwakusaziwa ukuba ukusebenzisa izityalo kunye neekhemikhali njengoko ziyilelwe kungakhokelela kumonakalo.
I-Dicamba isetyenziswe ngamafama ukusukela nge1960s kodwa ngemida ethathela ingqalelo ubungakanani bemichiza yokubalekela kude apho wafafazwa khona. Xa imveliso yokhula yokubulala ukhula eMonsanto efana neRoundup yaqala ukuphulukana nokusebenza kwayo ngenxa yokuxhathisa ukhula, iMonsanto yathatha isigqibo sokumilisela inkqubo yokulima i-dicamba efana nenkqubo yayo eyaziwayo yeRoundup Ready, eyayibhangqa imbewu enganyamezelekiyo ye-glyphosate ne-glyphosate herbicides.
Abalimi abathenga imbewu entsha ye-dicamba enganyamezelekiyo ngokulula inokunyanga ukhula olunenkani ngokutshiza amasimi onke nge-dicamba, nokuba ngeenyanga ezishushu ezishushu, ngaphandle kokonakalisa izityalo zabo, ngokweMonsanto, ethi Yazisa ngentsebenziswano yedicamba kunye ne-BASF ngo-2011. Iinkampani zithe i-dicamba herbicides yabo iya kuba mbalwa kakhulu kwaye ingathambekisi kangako kuneendlela ezindala zedicamba. Kodwa bala ukuvumela uvavanyo oluzimeleyo lwenzululwazi.
I-EPA yavuma ukusetyenziswa kweMonsanto's dicamba herbicide "XtendiMax" ngo-2016. I-BASF yavelisa eyayo i-dicamba herbicide eyibiza ngokuba yi-Engenia. Zombini iXtendiMax kunye ne-Engenia zathengiswa okokuqala eMelika ngo-2017.
IDuPont nayo yazisa iyeza lokubulala ukhula i-dicamba kwaye unokujongana nezimangalo ezininzi zamafama, ngokwegqwetha labamangali.
Kumabango abo asemthethweni, amafama atyhola ukuba bafumene umonakalo kokubini ukusuka ekuguqulweni kweenguqulelo ezindala ze-dicamba kunye nokukhupha iinguqulelo ezintsha ngokunjalo. Amafama athi iinkampani zinethemba loloyiko lokonzakala okunganyanzela amafama ukuba athenge imbewu ekhethekileyo ye-GMO dicamba ukuze ikhusele amasimi abo omqhaphu kunye neembotyi zesoya.
Abalimi abakhulisa ezinye iintlobo zezityalo abanazo iindlela zokukhusela amasimi abo.
Umlimi waseNyakatho Carolina uMarty Harper, okhula malunga neehektare ezingama-4,000 200,000 zecuba kunye namandongomane, umqhaphu, umbona, iimbotyi zesoya, ingqolowa kunye neebhatata, utshilo umonakalo onxulumene nedicamba kumasimi akhe wecuba ungaphezulu kwe- $ XNUMX. Uthe inxalenye yesityalo sakhe samandongomane sonakalisiwe.
Ngaphezulu kweefama ezingama-2,700 XNUMX ezinazo wafumana umonakalo wedicamba, ngokutsho kweYunivesithi yaseMissouri uprofesa wezesayensi uKevin Bradley.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker ulimo, I-BASF, Bayer, izityalo, Dicamba, EPA, zolimo, ukutya, glyphosate, impilo, IMonsanto, inambuzane, inzululwazi
ezaposwa ngomhla Novemba 27, 2018 by USusan Lang
Ukuqwalaselwa kwesayensi kwentsalela yokubulala izitshabalalisi kukutya kuyakhula; ukhuseleko lolawulo lubuzwa
Ababulali bokhula kwiingqolowa zengqolowa kunye neenkozo, izinambuzane kwijusi yeapile kunye nomxube wezinambuzane ezininzi kwisipinatshi, iimbotyi zomtya kunye neminye imifuno - zonke ziyinxalenye yokutya kwemihla ngemihla kwabantu abaninzi baseMelika. Kumashumi eminyaka, amagosa aseburhulumenteni abhengeze umkhondo omncinci wezi zinto zingcolileyo ukuba zikhuselekile. Kodwa umtsalane omtsha wovavanyo lwenzululwazi ucelomngeni kwezo ziqinisekiso.
Nangona abathengi abaninzi besenokungayazi loo nto, unyaka nonyaka, oososayensi bakarhulumente babhala ngendlela amakhulukhulu eekhemikhali ezisetyenziswa ngabalimi emasimini abo nakwizityalo zabo zishiya intsalela kukutya okutyiwa kakhulu. Ngaphezulu kweepesenti ezingama-75 zeziqhamo kunye nangaphezulu kwama-50 epesenti yemifuno ethathwe kwisampuli yezibulala-zinambuzane zakutshanje isampulu ingxelo ngoLawulo lokuTya kunye noLawulo lweziyobisi. Nkqu nentsalela ye-DDT yokubulala i-bug ethintelweyo ifunyenwe ekutyeni, kunye noluhlu lwezinye izinambuzane zokubulala izitshabalalisi ezaziwa ngoososayensi ukuba inxulunyaniswa noluhlu lwezifo kunye nezifo. I-pesticide endosulfan, ivaliwe kwihlabathi liphela ngenxa yobungqina bokuba inokubangela iingxaki zemithambo-luvo kunye nokuzala, kwafunyanwa nakwiisampulu zokutya, yatsho ingxelo ye-FDA.
Abalawuli baseMelika kunye neenkampani ezithengisa amachiza kubalimi banyanzelisa ukuba intsalela yezibulali zinambuzane ingabi sisoyikiso kwimpilo yabantu. Uninzi lwamanqanaba entsalela afunyanwa kukutya awela phantsi kwamanqanaba asemthethweni "okunyamezelana" abekwe yi-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo (i-EPA), abalawuli bathi.
"Abantu baseMelika baxhomekeke kwi-FDA ukuqinisekisa ukhuseleko lweentsapho zabo kunye nokutya abakutyayo," Umkomishinara we-FDA uScott Gottlieb uthe kumaphepha ndaba Ukuhamba ne-arhente ka-Okthobha 1 ukukhutshwa kwengxelo yayo yentsalela "Njengakwezinye iingxelo zakutshanje, iziphumo zibonisa ukuba intsalela yemichiza yokubulala izitshabalalisi ingaphantsi kokunyamezelwa yi-Arhente yokuKhuselwa kokusiNgqongileyo, ngenxa yoko ayibeki mngcipheko kubathengi."
I-EPA iqinisekile ukuba umkhondo wezibulali zinambuzane ekutyeni ukhuselekile kangangokuba iarhente inikezele ngezicelo ezininzi zenkampani yemichiza yokunyusa ukunyamezelana okuvumelekileyo, ngokubonelela ngesiseko esisemthethweni kumanqanaba aphezulu entsalela yokubulala izitshabalalisi ukuba ivunyelwe kukutya kwaseMelika.
Kodwa izifundo zakutshanje zesayensi ziye zakhokelela kwizazinzulu ezininzi ukuba zilumkise ukuba iminyaka yezithembiso zokhuseleko isenokuba ayilunganga. Ngelixa kungekho mntu kulindeleke ukuba alahle phantsi esitya isitya sokutya esineentsalela zokubulala izitshabalalisi, ukuvezwa okuphindaphindayo kwinqanaba lokulandela umkhondo wezibulali zinambuzane ekutyeni kunokuba negalelo kuluhlu lweengxaki zempilo, ngakumbi ebantwaneni, zitsho izazinzulu.
“Zininzi ezinye iziphumo zempilo; khange sizifunde nje ”
Iqela lezenzululwazi laseHarvard lipapashiwe uluvo Ngo-Okthobha echaza ukuba uphando oluthe kratya malunga nokunxibelelana okunokubakho phakathi kwezifo kunye nokusetyenziswa kweentsalela ze-pesticide "zifuneka ngokungxamisekileyo" njengoko ngaphezulu kweepesenti ezingama-90 zabemi base-US zinentsalela yokubulala izinambuzane kumchamo nakwigazi labo. Eyona ndlela iphambili yokuvezwa kwezi zinambuzane kukutya okutyiwa ngabantu, utshilo iqela lophando laseHarvard.
Iinzululwazi ezininzi ezinxulumene neHarvard zipapashe isifundo kwangoko kulo nyaka wabasetyhini ababezama ukukhulelwa. Iziphumo zicebise ukuba ukuvezwa kwento yokutya yezibulali zinambuzane kuluhlu "oluqhelekileyo" kunxulunyaniswa neengxaki zokukhulelwa kwabasetyhini kunye nokuzala abantwana abaphilayo, zitsho izazinzulu.
“Ngokucacileyo amanqanaba akhoyo okunyamezelana asikhusela kwityhefu ebukhali. Ingxaki kukuba akucaci ukuba lixesha elingakanani ixesha elide lokuchaphazeleka kwintsalela yokubulala izitshabalalisi ngokutya kunokuba yingozi empilweni, utshilo uGqirha Jorge Chavarro, unjingalwazi onxulumene neSebe leZondlo kunye ne-Epidemiology eHarvard Isikolo i-TH Chan seMpilo kaRhulumente, kunye nomnye wababhali bokufunda.
“Ukubhencwa kwintsalela yokubulala izitshabalalisi ngokutya kunxulunyaniswa [nezinye] neziphumo zokuzala kubandakanya ubudoda kunye nomngcipheko omkhulu wokuphulukana nokukhulelwa phakathi kwabasetyhini abaphantsi konyango lokungachumi. Zininzi ezinye iziphumo zempilo; khange sizifunde ngokwaneleyo ukwenza uvavanyo lomngcipheko olwaneleyo, ”utshilo uChavarro.
Ugqirha wezobisi uLinda Birnbaum, okhokela i-US National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), naye uphakamise inkxalabo malunga neengozi zemichiza yokubulala izitshabalalisi ngokuveza izinto ekucingelwa ukuba zikhuselekile. Kunyaka ophelile uye wabiza "Ukuncitshiswa kokusetyenziswa kwemichiza yokubulala izitshabalalisi yezolimo" ngenxa yokuxhalaba okuninzi kwimpilo yabantu, esithi "imigaqo ekhoyo yase-US khange ihambisane nenkqubela phambili kwezenzululwazi ezibonisa ukuba iikhemikhali ezisetyenziswa kakhulu zibangela iingxaki zempilo kumanqanaba ngaphambili ebecinga ukuba akhuselekile."
Kudliwanondlebe no-Birnbaum wathi iintsalela zamayeza e-pesticide ekutyeni nasemanzini ziphakathi kweentlobo zokuveza okufuna ukuphononongwa ngakumbi.
“Ngaba ndicinga ukuba amanqanaba abekiweyo ngoku akhuselekile? Mhlawumbi akunjalo, ”utshilo uBirnbaum. "Sinabantu abachanekileyo, nokuba kungenxa yemfuza yabo, okanye ubudala babo, nantoni na enokubenza babenakho ukubanazo ezi zinto," utshilo.
“Ngelixa sijonga amachiza ngexesha, kukho ubungqina obuninzi bezinto ezisebenza ngendlela ehambelanayo. Uninzi lweenkqubo zethu zovavanyo ezisemgangathweni, uninzi lwazo zaphuhliswa kwiminyaka engama-40 ukuya kwengama-50 eyadlulayo, azibuzi imibuzo ekufanele ukuba siyayibuza, utshilo.
Umthetho awuthethi ukhuselekile
Amanye amaphepha esayensi akutshanje akhomba kwiziphumo ezibi. Inye yeqela lezenzululwazi zamazwe apapashwe ngoMeyi ifumene i-glyphosate herbicide ngeedosi njengangoku “ezikhuselekileyo” ziyakwazi ukubangela iingxaki zempilo ngaphambi kokufikisa. Olunye uphando luyafuneka ukuqonda ubungozi obunokubakho ebantwaneni, ababhali bophando bathi.
Kwaye ephepheni Ipapashwe i-Oct. 22 kwi-JAMA yangaphakathi yoNyango, abaphandi baseFrance bathi xa bejonga intsalela yezibulala-zinambuzane ezinxibelelana nomhlaza kufundo lokutya kwabantu abangaphezulu kwama-68,000, bafumanise ukuba ukusetyenziswa kokutya okungafunekiyo, okunqabileyo ukuba kuphathe iintsalela zokwenziwa kwezibulali zinambuzane kunokutya okwenziweyo kunye nezityalo ezikhule ngokwesiqhelo, zazayanyaniswa nokwehla komngcipheko womhlaza.
Iphepha le2009 epapashwe ngumphandi waseHarvard kunye noososayensi ababini be-FDA bafumene iisampulu zokutya ezili-19 kwezili-100 abantwana abasoloko besitya eziqulathe ubuncinci isinambuzane esinye esaziwa ngokuba yi-neurotoxin. Ukutya abaphandi abakujongayo yimifuno emitsha, iziqhamo kunye nejusi. Ukusukela ngoko, ubungqina bukhulile malunga nefuthe elibi kwimpilo yabantu ngokubulala izinambuzane, ngakumbi.
"Imigangatho emininzi yangoku yomthetho yamayeza okubulala izitshabalalisi ekutyeni nasemanzini ayikhuseli ngokupheleleyo impilo yoluntu, kwaye ayibonisi inzululwazi yakutshanje," utshilo u-Olga Naidenko, umcebisi omkhulu kwezenzululwazi kwiQela eliSebenzayo lezeNdalo, nelikhuphe iingxelo ezininzi Ukujonga iingozi ezinokubakho kumayeza okubulala izitshabalalisi ekutyeni nasemanzini. "Umthetho awuthethi ukuba ukhuselekile," utshilo.
Omnye umzekelo wendlela ukuqinisekiswa kokhuseleko kufunyenwe kusilela ngayo xa kufikwa kwintsalela yokubulala izitshabalalisi yimeko yokubulala izinambuzane eyaziwa ngokuba yi-chlorpyrifos. Ithengiswa yi-Dow Chemical, eyaba yinkampani ye-DowDuPont ngo-2017, i-chlorpyrifos isetyenziswa ngaphezulu kweepesenti ezingama-30 zama-apile, i-asparagus, i-walnuts, itswele, iidiliya, i-broccoli, iitsheri kunye nekholifulawa ekhuliswe e-US kwaye ihlala ifumaneka kukutya okutyiwa ngabantwana. . I-EPA ithe kangangeminyaka ukubhencwa ngaphantsi kokunyamezelwa ngokwasemthethweni okusetiweyo kwakungekho nto inokukhathazeka ngayo.
Kunjalo uphando lwezenzululwazi Kwiminyaka yakutshanje ibonakalise unxibelelwano phakathi kokuchazwa kwe-chlorpyrifos kunye nokusilela kwengqondo ebantwaneni. Ubungqina bokwenzakala kwengqondo ezisakhulayo bunamandla kangangokuba i-EPA ngo-2015 wathi ukuba "ayinakufumanisa ukuba naluphi na unyamezelo lwangoku lukhuselekile."
I-EPA ithe ngenxa yamanqanaba angamkelekanga okubulala izinambuzane ekutyeni nakumanzi okusela acwangcise ukuthintela isibulali zinambuzane ekusebenziseni ezolimo. Kodwa uxinzelelo oluvela kwiDow kwaye iikhemikhali zeshishini lobby igcine ikhemikhali isetyenziswa kakhulu kwiifama zaseMelika. Ingxelo yakutshanje ye-FDA iyifumene i-11th ezona zinambuzane zixhaphakileyo kukutya kwaseMelika ngaphandle kwamakhulu kubandakanywa kuvavanyo.
A inkundla yomanyano ngo-Agasti uthe ukuba uLawulo lukaTrump lwalubeka emngciphekweni impilo yoluntu ngokugcina ii-chlorpyrifos zisetyenziselwa ukuveliswa kokutya kwezolimo. Inkqubo ye- Inkundla icatshulwe "Ubungqina benzululwazi bokuba intsalela yayo ekutyeni ibangela ukonakala kwe-neurodevelopmental ebantwaneni" kwaye yayalela i-EPA ukuba irhoxise konke ukunyamezelana kwaye inqande ikhemikhali kwintengiso. I-EPA kusafuneka isebenze kuloo myalelo, kwaye kunjalo efuna ukumanyelwa ngaphambi kwe-9 epheleleyoth ISekethe yeNkundla yeziBheno.
Xa ebuzwa ukuba angazichaza njani iindawo eziguqukayo kwi-chlorpyrifos, isithethi se-arhente sathi i-EPA "iceba ukuqhubeka nokujonga kwakhona isayensi ejongene neziphumo ze-neurodevelopmental" zekhemikhali.
Inyaniso yokuba isasetyenziswa ngokubanzi iyabacaphukisa kwaye iyabacaphukisa oogqirha abagxile kwimpilo yabantwana kwaye ibashiye bezibuza ukuba loluphi olunye unyango lokubulala izinambuzane ekutyeni olunokuthi lwenze ebantwini.
"Eyona nto iphambili kukuba eyona nkxalabo inkulu yezempilo yoluntu ye-chlorpyrifos ivela kubukho bayo ekutyeni," utshilo uGqirha Bradley Peterson umlawuli weZiko leNgqondo ePhuhlisayo kwiSibhedlele saBantwana eLos Angeles. Nokuba ukubhentsiswa okuncinci kunokuba nemiphumo emibi. ”
Isigqibo se-EPA sokuqhubeka nokuvumela ii-chlorpyrifos kwizidlo zaseMelika "luphawu lokuchithwa ngokubanzi kobungqina besayensi" obucela umngeni kwimpilo yabantu kunye nokunyaniseka kwesayensi, ngoku ka Dr. ULeonardo Trasande, olawula iCandelo lePediatrics yokuSingqongileyo kwiSebe lezeMpilo kwiYunivesithi yaseNew York yeLangone Health.
Ugqirha wezifo uPhillip Landrigan, umlawuli weKholeji yase-Boston ye-Global Public Health, kunye nowayesakuba sisazinzulu kwi-US Centers for Disease Control, ukhuthaza ukuvalwa kwazo zonke i-organophosphates, iklasi yezibulali zinambuzane ezibandakanya iichlorpyrifos, ngenxa yengozi eziyibeka ebantwaneni. .
U-Landrigan uthi: "Abantwana bachanabeke kakhulu kwezi khemikhali." Oku malunga nokukhusela abantwana. ”
Ukonyuka kokunyamezelana kwisicelo seshishini
Umthetho weFederal Food, Drug, and Cosmetic Act ugunyazisa i-EPA ukuba ilawule ukusetyenziswa kwezibulali zinambuzane ekutyeni ngokwemigangatho ethile yezomthetho kwaye inike i-EPA igunya elilinganiselweyo lokumisela ukunyamezelwa kweziqinisekiso zemihlangano yokubulala izitshabalalisi.
Ukunyamezelana kuyahluka ukusuka ekutyeni ukuya ekutyeni kunye nasekubizeni i-pesticide, ngenxa yoko iapile inokuthwala ngokusemthethweni uhlobo oluthile lwentsalela yezinambuzane kune plam, umzekelo. Ukunyamezelana kwahluka ngokwamazwe, ke oko i-US iseta njengonyamezelo olusemthethweni lwentsalela yokubulala izinambuzane ekutyeni okuthile-kwaye ihlala ihluke kakhulu kunemida ebekwe kwamanye amazwe. Njengengxenye yokuseta ezo nyamezelo, abalawuli bavavanya idatha ebonisa ukuba ingakanani intsalela eqhubekayo emva kokuba isibulali zinambuzane sisetyenzisiwe njengoko kulindelwe kwisityalo, kwaye benza uvavanyo lomngcipheko wokutya ukuqinisekisa ukuba amanqanaba entsalela yezinambuzane ayibeki nkxalabo yezempilo yabantu. .
Iarhente ithi ibangela inyani yokuba ukutya kweentsana nabantwana kunokuba kwahluke kakhulu koku kwabantu abadala kwaye batye ukutya okungaphezulu kobungakanani babo kunabantu abadala. I-EPA ikwatsho ukuba idibanisa ulwazi malunga neendlela zokuvezwa kwezinambuzane - ukutya, amanzi okusela okusetyenziselwa ukuhlala-ngolwazi malunga nobutyhefu bokubulala izinambuzane nganye ukumisela umngcipheko onokubangelwa ziintsalela zezibulali zinambuzane. Iarhente ithi ukuba umngcipheko "awamkelekanga," ngekhe uvume ukunyamezelana.
I-EPA ikwathi xa isenza izigqibo zokunyamezelana, "ifuna ukulungelelanisa ukunyamezelana kwe-US kunye nemigangatho yamazwe aphesheya xa kunokwenzeka, ngokuhambelana nemigangatho yokhuseleko lokutya e-US kunye nezolimo."
IMonsanto, eyaba yeyunithi yeBayer AG ekuqaleni konyaka, icele ngempumelelo i-EPA ukuba yandise amanqanaba eentsalela zeglyphosate ezivunyelwe kukutya okuninzi, kubandakanya ingqolowa kunye nehabile.
Ngo-1993, umzekelo, i-EPA ibinonyamezelo ye-glyphosate kwii-oats kwiindawo eziyi-0.1 kwisigidi ngasinye (ppm) kodwa ngo-1996 UMonsanto ubuze i-EPA ukunyusa ukunyamezelana ukuya kwi-20 ppm kunye I-EPA yenze njengoko ibuziwe. Ngo-2008, kwisiphakamiso sikaMonsanto, I-EPA kwakhona ijonge ukuphakamisa unyamezelo ye-glyphosate kwi-oats, ngeli xesha ukuya kwi-30 ppm.
Ngelo xesha, ikwatsho ukuba iyakuphakamisa ukunyamezelwa kwe-glyphosate kwirhasi ukusuka kwi-20 ppm ukuya kwi-30 ppm, inyuse ukunyamezelwa kumbona wentsimi ukusuka kwi-1 ukuya kwi-5 ppm kunye nokuphakamisa ukunyamezelwa kwentsalela ye-glyphosate kwingqolowa ukusuka kwi-5 ppm ukuya kwi-30 ppm, ukwanda ngama-500 epesenti. I-30 ppm yengqolowa ithelekiswa namanye amazwe angaphezu kwama-60, kodwa ingaphezulu kokunyamezelwa okuvunyelwe kumazwe angaphezu kwama-50, ngokwe unyamezelo database isekwe ngenkxaso mali ye-EPA kwaye igcinwe ngoku liqela labacebisi ngemicimbi yabucala.
"I-Arhente igqibe ekubeni ukunyamezeleka okwandileyo kukhuselekile, oko kukuthi, kukho isiqiniseko esifanelekileyo sokuba akukho monakalo uya kubangelwa kukuvezwa ngokubanzi kumthamo wamachiza okubulala izitshabalalisi," utshilo u-EPA kwi-Meyi 21, 2008 Federal Register.
“Zonke ezi ngxelo zivela kwi-EPA- sithembe ukuba ikhuselekile. Kodwa ke inyaniso asazi ukuba ikhuselekile na, ”utshilo uGqirha Bruce Lanphear, isazinzulu kwezonyango e-Child & Family Research Institute, kwisibhedlele sabantwana i-BC, nakwinjingalwazi yecandelo lezenzululwazi zezempilo kwiYunivesithi yaseSimon Fraser e IVancouver, iBritish Columbia. U-Lanphear uthe ngelixa abalawuli becinga ukuba ziyanda iziphumo zetyhefu, ubungqina bezenzululwazi bubonisa ukuba ezinye iikhemikhali zinetyhefu kumanqanaba asezantsi okuvezwa. Ukukhusela impilo yoluntu kuya kufuna ukuphinda uqwalasele iingcinga ezisisiseko malunga nendlela iiarhente ezilawula ngayo iikhemikhali, watsho ephepheni ipapashwe kunyaka ophelileyo.
Kwiminyaka yakutshanje zombini iMonsanto kunye neDow zifumene amanqanaba amatsha okunyamezelana nedicamba kunye ne-2,4-D ekutyeni ngokunjalo.
Ukunyusa ukunyamezelana kuvumela amafama ukuba asebenzise amayeza okubulala izitshabalalisi ngeendlela ezahlukeneyo ezinokushiya intsalela, kodwa loo nto ayoyikisi impilo yabantu, ngokweMonsanto. Kwibhlog ethunyelwe kunyaka ophelileyo, Isazinzulu seMonsanto uDan Goldstein uqinisekisile ukhuseleko lwentsalela yokubulala izinambuzane ekutyeni ngokubanzi nakwiiglyphosate ngokukodwa. Nokuba sele begqithile kwimida esemthethweni, intsalela yokubulala izitshabalalisi ayibangeli bungozi, ngokukaGoldstein, othumele ibhlog yakhe ngaphambi kokuba athathe umhlala phantsi eMonsanto kulo nyaka.
Malunga nesiqingatha sokutya okwenziwe kwisampulu inezinto zokubulala izitshabalalisi
Ngexesha leenkxalabo zesayensi, i idatha yakutshanje ye-FDA kwiintsalela zamayeza okubulala izitshabalalisi ekutyeni kufunyaniswe ukuba phantse isiqingatha sokutya isampulu ye-arhente inezinto zokubulala izinambuzane, iyeza lokubulala ukhula, ukungunda kunye nezinye iikhemikhali eziyityhefu ezisetyenziswa ngamafama ekukhuliseni ukutya okwahlukeneyo.
Ngaphezulu kweepesenti ezingama-90 zeejusi zeapile ezazisampuliwe zafunyanwa ziqulathe izibulali zinambuzane. I-FDA ikwaxele ukuba ngaphezulu kwe-60 yepesenti yecantaloupe ephethe intsalela. Ngokubanzi, iipesenti ezingama-79 zeziqhamo zaseMelika kunye neepesenti ezingama-52 zemifuno ziqulethe iintsalela zemithi yokubulala izitshabalalisi - uninzi lwazo lusaziwa ngoososayensi inxulunyaniswa noluhlu lwezifo kunye nezifo. Amayeza okubulala izitshabalalisi afunyanwa nakwisoya, umbona, i-oat kunye neemveliso zengqolowa, kunye nokutya okugqityiweyo okufana neecereal, ii-crackers kunye ne-macaroni.
Uhlalutyo lwe-FDA "phantse ngokukodwa" lujolise kwiimveliso ezingabhalwanga njenge-organic, ngokutsho kwesithethi se-FDA uPeter Cassell.
I-FDA ihlehlisa ipesenti yokutya okuqulethe intsalela yokubulala izitshabalalisi kwaye igxile kwipesenti yeesampulu ekungekho kophula amanqanaba okunyamezelana. Kwingxelo yayo yakutshanje, I-FDA ithe ngaphezulu kwe "99% yamakhaya neyama-90% yokungenisa ukutya kwabantu kuthobela imigangatho yomanyano."
Ingxelo ibonakalise ukumiliselwa kwe-arhente yokuvavanya i-glyphosate yokubulala ukhula ekutyeni. I-Ofisi yoXanduva lukaRhulumente yathi ngo-2014 ukuba bobabini i-FDA kunye neSebe lezoLimo lase-US kufuneka baqale ukuvavanya rhoqo ukutya kwe-glyphosate. I-FDA yenze uvavanyo olulinganiselweyo kuphela olukhangela intsalela ye-glyphosate, nangona kunjalo, isampulu yengqolowa kunye nesoya kunye nobisi kunye namaqanda kumbulali wokhula, utshilo umbutho. Akukho ntsalela ye-glyphosate eyafunyanwa kubisi okanye amaqanda, kodwa iintsalela zafunyanwa kwiipesenti ezingama-63.1 zeesampulu zombona kunye neepesenti ezingama-67 zeesampulu zesoya, ngokweedatha ze-FDA.
Iarhente khange ichaze okufunyaniswe yenye yeekhemisti zeglyphosate kwi-oatmeal kwaye iimveliso zobusi, nangona i-FDA chemist yenza ukuba iziphumo zakhe zaziwe ngabaphathi kunye nezinye izazinzulu ngaphandle kwe-arhente.
UCassell uthe iziphumo zobusi kunye ne-oatmeal bezingeyonxalenye yesabelo se-arhente.
Lilonke, ingxelo entsha ye-FDA igubungele isampulu eyenziwe ngo-Okthobha 1, 2015, ukuya nge-30 kaSeptemba, 2016, kwaye yaquka uhlalutyo lweesampulu ezingama-7,413 zokutya ezivavanywe njengenxalenye yenkqubo ye-FDA "yokujonga izilwanyana." Uninzi lweesampulu yayikukutya okuza kutyiwa ngabantu, kodwa iisampulu ezingama-467 yayikukutya kwezilwanyana. Iarhente ithe iintsalela zezitshabalalisi zifunyenwe kwiipesenti ezingama-47.1 zeesampulu zokutya zabantu eziveliswe ekhaya kunye neepesenti ezingama-49.3 zokutya okungeniswe kwamanye amazwe amiselwe ukutya kwabathengi. Imveliso yokutya kwezilwanyana yayifana, kunye nentsalela yokubulala izitshabalalisi efumaneka kwiipesenti ezingama-57 zeesampulu zasekhaya kunye neepesenti ezingama-45.3 zokutya kwamanye amazwe kwezilwanyana.
Uninzi lweesampulu zokutya ezingenisiweyo zibonise intsalela yezibulali zinambuzane eziphakamileyo ngokwaneleyo ukuba zingaphula umda osemthethweni, utshilo uFDA. Phantse iipesenti ezingama-20 zeesampulu zeemveliso eziziinkozo ezingeniswe elizweni zabonisa amanqanaba aphezulu ngokungekho semthethweni amayeza okubulala izitshabalalisi, umzekelo.
Uphando lwethu, Pesticides 2 4-D, Bayer AG, Impilo kaRhulumente yaseBoston yeKholeji, UBradley Peterson, UBruce Lanphear, IZiko loPhando lwaBantwana kunye noSapho iBhedlele yaBantwana yaBantwana, esiyi, UDan Goldstein, DDT, ISebe lezeMpilo kwiYunivesithi yaseNew York yeLangone Health, Dicamba, IDow Chemical, DowDuPont, UGqirha Jorge Chavarro, endosulfan, Environmental Protection Agency, Iqela loLuntu lokuSebenza, EPA, I-EWG, FDA, Ukutya kunye noLawulo lweeMithi, Gao, glyphosate, Ofisi yoGunyazo kaRhulumente, Isikolo seHarvard TH Chan seMpilo kaRhulumente, IZiko leNgqondo eKhulayo kwiSibhedlele saBantwana eLos Angeles, NguLeonardo Trasande, ULinda Birnbaum, IMonsanto, NIEHS, Olga Naidenko, i-organophosphates, UPeter Cassell, UFilipu Landrigan, Scott Gottlieb, Lawulo lweTrump, IZiko leLizwe laseMelika lezeNzululwazi yezeMpilo